ဈေးချထားတဲ့ ယူနိုက်တက် Dou ၊ ရာဖင်ညာ ရဲ့ မပြီးသေးတဲ့ ဇာတ်လမ်း ၊ လူကာကူ ကို မကြိုဆိုတဲ့ အင်တာ အယ်ထရာ တို့နဲ့ . . . ယနေ့ အတွက် နောက်ဆုံးရ အားကစား သတင်းများ - xyznews.co
ဈေးချထားတဲ့ ယူနိုက်တက် Dou ၊ ရာဖင်ညာ ရဲ့ မပြီးသေးတဲ့ ဇာတ်လမ်း ၊ လူကာကူ ကို မကြိုဆိုတဲ့ အင်တာ အယ်ထရာ တို့နဲ့ . . . ယနေ့ အတွက် နောက်ဆုံးရ အားကစား သတင်းများ
ရီးရဲမက်ဒရစ် ကနေ ထွက်ခွာလာပြီး ဘယ်အသင်းကို ပြောင်းမလဲ မသိရ သေးတဲ့ ဝေးလ် လက်ရွေးစင် တောင်ပံ ကစားသမား ဂါရတ်ဘေးလ် ဟာ ကာဒစ် စီးတီး အသင်းရဲ့ လေ့ကျင့်ရေးကွင်း ကို သွားရောက် ခဲ့တယ်လို့ သတင်း ထွက်လာတာကြောင့် မိခင် နိုင်ငံ အသင်းမှာသာ ပြန်ကစား နိုင်တဲ့ အလားအလာတွေ မြင့်တက် လာခဲ့ ပါတယ် ။
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် ကတော့ ဖရန်ကီ ဒီယွန် အတွက် ပေါင် ၆၅ သန်း + အပိုဆုကြေး တို့နဲ့ ကမ်းလှမ်းဖို့ အဆင်သင့် ဖြစ်နေပြီလို့ သိရပါတယ် ။
ဒါ့အပြင် ယူနိုက်တက် ဟာ ဝက်ဖိုဒ့် ဂိုးသမား ဒန်နီရယ် ဘတ်ချ်မန်း ကိုလည်း အရန် ဂိုးသမား နေရာအတွက် ပြောဆို ဆွေးနွေး နေတယ်လို့ ကြားသိရ ပါတယ် ။
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် က ပေါ်တို တိုက်စစ်သမား အီဗန်လီဆင် ကို ခေါ်ယူဖို့ ကြိုးစား နေတယ်ဆိုတာ မဟုတ်ဘဲ ကောလဟာလ သက်သက်သာ ဖြစ်တယ်လို့ ဖာဘရီဇီယို ရိုမာနို က ရေးသား ဖော်ပြ သွားခဲ့ပါတယ် ။
ယူနိုက်တက် နည်းပြ အဲရစ် တန်ဟတ် ဟာ နွေရာသီမှာ ရောင်းထုတ် လိုတဲ့ နောက်ခံလူ အဲရစ် ဘိုင်လီ အတွက် ပေါင် ၈.၅ သန်း ၊ အန်တိုနီ မာစီရယ် အတွက် ပေါင် သန်း ၂၀ ဈေးသတ်မှတ် လိုက်တယ်လို့ သိရှိရ ပါတယ် ။
ဘိုင်ယန်မြုးနစ် ဒါရိုက်တာ ဆာလီဟာမစ်ဇ် က သူတို့ ဟာ လီဝန်ဒေါ့စကီး ကို စာချုပ်သက်တမ်း ပြည့်မယ့် ၂၀၂၃ အထိ ဆက်ထိန်းထားဖို့ ဆန္ဒ ရှိတယ်ဆိုတာကို လွန်ခဲ့တဲ့ ရက်အတော် ကြာကြာ ကတည်းက ထုတ်ဖော် ပြောဆိုထားခဲ့ပြီး ဖြစ်သလို အဆိုပါ ရည်ရွယ်ချက် ကိုလည်း ပြောင်းလဲမှာ မဟုတ်ကြောင်း ၊ လီဝန်ဒေါ့စကီး အနေနဲ့ ဇူလိုင် ပထမ အပတ် အကုန်မှာ စတင်မယ့် ရာသီကြို ပြင်ဆင် လေ့ကျင့်မှုကို လာရောက် ပူးပေါင်းမယ် လို့လည်း မျှော်လင့်ကြောင်း ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
နွေရာသီမှာ ခြေသွက်နေတဲ့ PSV ဟာ ရှက်တာ ဒိုးနက် အသင်းရဲ့ ဘရာဇီး နောက်ခံလူ မာလွန် ကို ခေါ်ယူဖို့ ဆွေးနွေး ပြောဆို နေတယ်လို့ သတင်း ကြားသိရ ပါတယ် ။
ဘာဆာ လူငယ်လေး ဂါဗီ ဟာ အသင်းနဲ့ စာချုပ်သစ် ချုပ်ဆိုမှာ သေချာနေပြီ ဖြစ်ပေမယ့် ညှိနှိုင်းမှုတွေဟာ မပြီးပြတ် သေးဘဲ ကိစ္စ အနည်းငယ်မျှ ကျန်ရှိ နေသေးတယ်လို့ သိရပါတယ် ။
ရိုးမား ကနေ အင်တာမီလန် ကို ပြောင်းလာတဲ့ ကွင်းလယ်လူ မစ်ခီတာရမ် ကတော့ မီလန် ကလပ် နဲ့ ဆေးစစ်မှု ပြီးမြောက် သွားခဲ့ပြီလို့ သိရကာ ၂၀၂၄ အထိ စာချုပ် ချုပ်ဆို သွားမယ်လို့ သိရှိရ ပါတယ် ။
အင်တာမီလန် အသင်းရဲ့ အမာခံ ပရိသတ် အဖွဲ့ ဖြစ်တဲ့ အင်တာ အယ်လ်ထရာ က ဘယ်လ်ဂျီယံ တိုက်စစ်မှူး ရဲ့ အပြောင်းအရွှေ့ နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျေနပ်မှု မရှိတာကြောင့် လူကာကူ အင်တာကို ပြန်ရောက်လာချိန်မှာ အသင်းရဲ့ အလံတွေ နဲ့ ကြိုဆိုမှု မပြုလုပ် ကြဖို့ တိုက်တွန်း ပြောဆို နေတယ်လို့ သိရပါတယ် ။
အင်တာ အယ်လ်ထရာ က လူကာကူ ရဲ့ ချဲလ်ဆီး အသင်းဆီ ပြန်လည်ပြောင်းရွှေ့မှု အပေါ် အမြင်မကြည် ဖြစ်ခဲ့ပြီး အခုလို ချဲလ်ဆီးမှာ အဆင်မပြေမှ အင်တာကို ပြန်ပြောင်းလာမှု အတွက် ဝမ်းမမြောက်နိုင်ဘူးလို့လည်း သိရပါတယ် ။
မော်ရင်ဟို ရဲ့ ရိုးမား ဟာ ဗလင်စီယာ တောင်ပံ ကစားသမား ဂွန်ကာလို ဂွီဒက်စ် ကို ခေါ်ယူနိုင်ဖို့ အလားအလာ ကောင်းနေပြီး ယူရို သန်း ၂၀ အပြင် ကားလက်စ် ပီရက်ဇ် ကိုပါ အလိုက်ထည့်ပေးပြီး သဘောတူညီမှု ရယူနိုင်ဖွယ် ရှိတယ်လို့ ကြားသိရပါတယ် ။
ဗလင်စီယာ ရဲ့ အဓိက ကစားသမား ၂ ယောက် ဖြစ်တဲ့ ကားလိုစ့် ဆိုလာ နဲ့ ဟိုဆေး ဂါယာ တို့ဟာ စာချုပ်သက်တမ်း နောက်ဆုံး နှစ်ထဲကို ရောက်ရှိ နေပြီ ဖြစ်ပေမယ့် အသင်းဘက်က သက်တမ်းတိုးဖို့ စတင်ခြင်း မရှိသေးဘူးလို့ သိရှိရ ပါတယ် ။
ယူဗင်တပ် အသင်းဟာ PSG တိုက်စစ်မှူး နေမာ ကို ခေါ်ယူဖို့ စဉ်းစား နေတယ်လို့လည်း သတင်း ထွက်လာခဲ့ ပါတယ် ။
ဖီအိုရင်တီးနား ဟာ သူတို့ရဲ့ နည်းပြ ဗီဆင်ဇို အီတလီယာနို ကို ၂၀၂၄ အထိ သက်တမ်းတိုး လိုက်ပြီး နောက်ထပ် ၁၂ လ သက်တမ်း တိုးခွင့်ကိုပါ ထည့်သွင်း ချုပ်ဆို ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ် ။
ဒါ့အပြင် ဖလောရင့် အခြေစိုက် ကလပ် ဟာ ဆော်ဒီ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းစုထံ ကလပ် အသင်းကို ယူရို သန်း ၃၅၀ နဲ့ ရောင်းချဖို့ အလားအလာ များနေတယ်လို့လည်း သတင်း ထွက်ပေါ် လာခဲ့ပါတယ် ။
လိဒ် တောင်ပံ ကစားသမား ရာဖင်ညာ အတွက် စပါး ၊ အာဆင်နယ် တို့ အကြားက အားပြိုင်မှု ဟာ ကြာမြင့် နိုင်ဖို့ ရှိနေပါတယ် ။
ဘာစီလိုနာ ဟာ ရာဖင်ညာ နဲ့ လပေါင်းများစွာ ကတည်းက သဘောတူညီမှု ရရှိ ထားခဲ့ပေမယ့် လိဒ် အသင်းဘက်က တောင်းဆိုတဲ့ ကြေးကို မပေးချေ နိုင်တာကြောင့် အားပြိုင်ပွဲမှာ နောက်ရောက်နေတာ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ် ။`
ဆီဗီးလား နောက်ခံလူ ဂျူးလ် ကွန်ဒေး ဟာ ဒီနှစ် နွေရာသီမှာ ဆီဗီးလ် ကလပ် ကို စွန့်ခွာဖို့ ပြင်ဆင် ထားပြီလို့ ကြားသိရပေမယ့် ဘယ်ကို သွားမယ်ဆိုတာ ကိုတော့ အခုထိ မဆုံးဖြတ် ရသေးဘူးလို့ သိရပါတယ် ။
ဘာစီလိုနာ အမျိုးသမီး အသင်းမှာ ၇ နှစ်ကြာ ကစားပြီး အသင်းရဲ့ သမိုင်းတလျောက် ဂိုးသွင်း အများဆုံး မှတ်တမ်းကို ပိုင်ဆိုင် ထားတဲ့ ဂျန်နီ ဟာမိုဆို ဟာ အသင်းကနေ ထွက်ခွာပြီး မက္ကဆီကို အမျိုးသမီး လိဂ်ထံ ပြောင်းရွှေ့ သွားတော့မယ်လို့ သတင်း ကြားသိရ ပါတယ် ။
မက်ဒရစ်မြို့သူ ဖြစ်တဲ့ ဟာမိုဆို ဟာ ဘာစီလိုနာ အမျိုးသမီး အသင်းနဲ့ အမှတ်ပေး ဖလား ၅ ကြိမ် ၊ ရှုံးထွက် ဖလား ၄ ကြိမ် ၊ စူပါကိုပါ ဖလား ၂ ကြိမ် နဲ့ အမျိုးသမီး ချန်ပီယံလိဂ် ဖလား တကြိမ် တို့ကို ဆွတ်ခူး ရယူနိုင်ခဲ့ ပါတယ် ။
လာလီဂါ ကို တန်းပြန်တက်လာတဲ့ ဂီရိုနာ အသင်း ရဲ့ မြို့တွင်း လှည့်လည် အောင်ပွဲခံပွဲမှာ အသင်းရဲ့ ဓါတ်ပုံ သတင်းထောက် တဦးဟာ သစ်ပင်နဲ့ ရိုက်မိပြီး အမိုးဖွင့် ဘတ်စ်ကားပေါ်ကနေ ပြုတ်ကျလု ဖြစ်ခဲ့ပေမယ့် ဂီရိုနာ အသင်းရဲ့ ၁၉ နှစ် အရွယ် နောက်ခံလူ အာနူ မာတီနက် က လှမ်းဆွဲတင်ပြီး ကူညီ ကယ်တင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ သတင်း ကြားသိရ ပါတယ် ခင်ဗျာ . . . . . ။
Previous Article ဂျေးဇု ဟာ ချဲလ်ဆီး နဲ့ စပါး ကို ငြင်းပယ်ပြီး အာဆင်နယ် အသင်းကို ပြောင်းရွှေ့လိမ့်မယ်လို့ဆိုတဲ့လီဗာပူး ဂန္တဝင်ဟောင်း
Next Article လီဗာပူး ပရိသတ်တွေ ကို နှုတ်ဆက်သွားတဲ့ ဆာဒီယို မာနေး ရဲ့ အင်တာဗျူး